Kismaayo yaa iska leh? W/Q Warsame Gaabane | RBC Radio	Home
Kismaayo iyo Masiirka Midnimada Qaran Soomaaliyeed. W/Q Maxamed Abdullahi (Ildab)
Sunday, April 7th, 2013 at 02:53 am	/ 1 Comment Iskoolada luqadaha sidee u hormarinaa? W/Q Axmed C/samad
Saturday, April 6th, 2013 at 11:56 pm	/ No Comment Ceelbuur Waa Caasimada Mugahirsha. W/Q Dr. Saciid Ciise Maxamud
Wednesday, April 3rd, 2013 at 06:48 am	/ 18 Comments Iswaafainta Mawqifka Dawladda iyo Shirka Jubooyinka. W/Q Abdi Guled Mohamed
Wednesday, April 3rd, 2013 at 01:06 am	/ No Comment Dooxyada Dadka iyo Duunyada Halaaga!. W/Q Cabdifataax I. Mursal: Wednesday, April 3rd, 2013 at 12:56 am	/ No Comment Tuesday, October 9th, 2012 at 12:04 am Kismaayo yaa iska leh? W/Q Warsame Gaabane
Kismaayo yaa iska leh?
Sidey dalka soomaaliyeed uga bur burtey dowladdii dhexe waxaa aad usoo batey ereyga la yiraahdo ”magaalo hebla qabiil hebel baa leh”!
Arrintaas ayaan maanta halkaan uga faaleynayaa anigoo isku deyaya inaan dadka ku soo kordhiyo aqoon ku saabsan arrintaas anigoo ku hal qabsadey magaalada Kismaayo oo uu hadda ka taaganyahey buuqa ugu badan.
Waxaad arkeysaa soomaalidii oo goobaha lagu sheekeysto haddey ahaan lahaayeen maqaayado iyo golayaal caadi ah ama online ah arrintaas iskugu wareerey oo markey ka doodayaanna dooddoodu ay faraha ka baxeyso oo qabyaalad iyo balaayo iyo fitnooyin ay u gudbeyso.
Haddii la murmee aan doodda loo sameyn wax lagu xakameeyo dooddu waxey noqoneysaa dood la dhex dhigey dad dhego la, iyo dad indho la,. Sidee isku fahmayaan?
Arrinta sheegashada qabiilku waa arrin baahideedu timid markii dowladdu meesha ka baxdey. Oo qabaa,ilkii buuxiyeen booskii dowladnimada. Waxaa kaloo sii wehliya in loo isticmaalayo magaalooyinka sheegashadooda in awoodda iyo talada qeybsigeeda lagu gaaro. Awoodda guud oo ummadda dhan ka dhaxeysa iyo midda degaanka markaas dooddu ka taagantaheyba.
Kismaayo waxey la mid tahey Baydhabo, B/Weyne, Muqdisho iyo Jowhar iyo Cadaado iyo Gaalkacyo. Xagga sharciga Islaamka iyo xagga xeerarka dowladnimadaba.
Ma jirto entity ama kayaan ama hay,ad leh “shakhsiyad qaanuuni ah” ama “legal personality” oo la yiraahdo qabiil hebel.
Legal personality maxaa laga wadaa?
“Legal personality (also artificial personality, juridical personality, and juristic personality) is the characteristic of a non-living entity regarded by law to have the status of personhood”. source Wikipedia
Waxaa la yiraahdaa shakhsiyad qaanuuni ah wax aan nooleyn laakiin sharcigu siiyey sifada qofka oo kale.
Qofka caadigaa waan wada naqaannaa oo waxbuu yeelan karaa, heshiisyana wuu geli karaa(contracts ama caqdi).
Sidoo kale shakhsiga qaanuunigaana waxaa la siiyey sifooyinkaas, oo waxna wuu yeelan karaa contractsna wuu geli karaa.
Tusaaleyaal ku saabsan shakhsiga qaanuunigaa
Waxaa ka mid ah dowladda iyo ha,adaheeda, shirkadaha jamciyadaha iyo ururrada iyo axsaabta siyaasadeed oo leh aqoonsi sharci ah ama mid si waaqici ah u jira(de facto recognition).
Marka ururku wuxuu yeelan karaa xafiisyo, maaliyad iwm. Waana inuu yahey mid la aqoonsanyahey ama inuu yahey mid si dhab ah oo muuqata u jira oo jiritaan muuqda leh.
Haddaba aqristow qabiil magaalo ama degaan dhan sheeganaya sidee loogu sameyn karaa qaab sharci ah oo loo fahmo?
Aad ayey u adagtahey in qabiilbaa magaalo leh, ama degaan leh loogu sameeyo qaab sharci ah oo la jaan qaadi kara xadaaradda aadanaha oo kumanaan sano kahor bulshada u sameysey wax la yiraahdo dowladnimo oo iyadu ah shakhsi qaanuuni ah oo bulshada dhan wada matasha.
Arrintaas in qabiil yeesho degaan oo si guud oo “mushaac ah” uu u lahaado waa arrin xadaaradda dowladnimada ka hor imaaneysa oo ay lahaan jireen shucuubta bidaa,igaa(premative societies).
Wax practically functional ah oo laga shaqeysiin karana ma ahan.
Tusaale ahaan qofku wuxuu leeyahey hantidiisa gaarkaa oo uu ku heley waddooyinka wax lagu hantiyo.
Dowladduna maaddaama ay dadkoo dhan wada matasho waxey leedahey hantida guud oo dadkoo dhan ka dhaxeysa. Haddey tahey hanti ma guurtaa ama mid kale.
Waxaad maqleysaa safaaradda Somaliya oo Kenya ku taal oo loo soo celiyey dowladda soomaaliyeed. Maraakiibtii soomaaliyeed oo Yemen taalley. Diyaaraddii Somali airlines oo Germeny taalley. Dhul dan guud ah oo bannaan. Mid dhisan oo dadkii degganaa laga saarayo.
Laakiin xaggee qabiil leeyahey?
Maba lahan shakhsiyad qaanuuni ah oo wax yeelan karta. Practically na qaab lahaanshihiisa looga gar baxo lama yaqaanno.
Haddaba sheegashada noocaas ah waa waxba kama jiraan iyo hadal maalaa yacni ah oo aan meelna kasoo gelin sharciga islaamka iyo kan dowligaa midna.
Maamulka dadka degaanka iyo caddaaladda bulshada
Cinwaankaas aan kor kusoo xusey ayey soo hoos geleysaa dadka wax tabashadooda ku aaddan sheegashada degaannadu. Laakiin waa in marka hore fahamka qaldan oo ah in qabiil wax yeelan karo meesha laga saaro.
Is hoos gelin ula kac ah iyo ujeeddooyin qalloocan Waa inaan la is hoos gelin arrimo badan oon shuqul isku laheyn iyadoo loo soo marayo erayadaas lahaanshaha qabiilka.
Dadka deggan degaannada miyi iyo magaalaba waxey xaq u leeyihiin iney helaan maamul ku dhisan caddaalad oo iyaguna ay ku qanacsanyihiin. Dowladdana waxaa waajib ka saaranyahey sidey ku ilaalin karto arrintaas iney ku dadaasho.
Laakiin iyadoo baqdinta dadku qabaan oo ah in la dulmiyo oo qaab qabiil loogu xad gudbo laga faa,iideysanayo haddii loo maro ka warran arrimo kale oonba la iska jirin?
Sida qabqablennimo iyo kooxeysi kasoo horjeeda dowladnimada dhanba?
Maamullo usii socda iney dalka kala googooyaan oo aakhirkana gooni isku taaga?
Maammullo buffer zone ah oo shisheeye ka danbeeyo oo danahooda ku ilaashado?
Sidee haddaba ugu habboon oo loo daaweeyaa baqdinta ay qabaan bulshooyinka degaannada kala geddisan iyadoo dowladnimada iyo dalka midnimadiisana aan gor gortan la gelineyn?
Ma in maleeshiyo beeleedyo inta lasoo hubeeyo ay iyagu maamul sameystaanbaa oo dowladduna ay shabbadda u saarto wixii ay maleeshiyadaas iyo kaabbahoodu ula yimaadaan?
Maamullada dalka ka jira oo dhan haddeysan jirin qaab ay dowladda dhexe uga sarreyso oo ay u hoos imaanayaan waa dowladnimo gooni ah ama magaca halla caddeeyo ama wax kale hallagu sheegee.
Haddey tabari diiddo oo dantu qasabto waa meesheeda oo dani waa seeto,laakiin marna in la oggolaado ma ahan iney qabaa,il abaabulan oo shisheeye ku daaban ay dowladda kula loollamaan lahaanshihii degaanno ka tirsan jamhuuriyadda. Maleeshiyo qaab qabiil isku soo abaabuley oo Kenya la socda hadduu la mid yahey kan Muqdisho ka dagaallamaya ama Baydhabo ama B/Weyne ma laha sifo uu dowladda dhexe ugu qabsado maamul u sameynta Kismaayo oo uu ku yiraahdo “madaxweynuhu masoo faro gelin karo maamul u sameynta Kismaayo”!
Madaxweynuhu wuxuu leeyahey sifo qaanuuni ah oo wuxuu maamulaa dalka dhan ee adiga maxey tahey sifadaada qaanuunigaa?
Arrinta ma ahan inaan ookiyaalo qabiil ku eegno. Oo xaqiiqdu nooga dhex lunto muranka ku saabsan reer hebelbaa magaalo hebla dega iyo kuwaasba deggan iyo kuwaasbaa majority ka ah.
Dhammaan qabaa,ilka dega dowladdaa dowlad u ah iyadaana mas,uuliyad ka saarantahey lagana doonayaa iney u xaq soorto. Laakiin maxey tahey adiga sifadaadu?
Ma lahaansho gaar ahaaneedbaa ku wadda oo beer ama guri ama gaari gooniya ayaad sheeganeysaa?
Mise waxaad tahey shakhsi qaanuuni ah oo dowladdu aqoonsatey oo leh awooddaas?
Mise is qore qorigiisa wata oo qabqableyn iyo kooxeysi ku socda oo awoodda inuu ku qaato qori caaraddiis rabaad tahey?
Haddaad qaadato xaggeed la aadeysaa dowladnimada aad diiddantahey miyaad kala hoos baxeysaa oo dowlad kale ayaad la hoos geleysaa mise dowlad gaar ah ayaad yeelaneysaa oo waad goosaneysaa?
Dadku wixii hore oo dowlad la,aanta lagu bartey ayey iska dabo socdaane wax sharci ah oo shaqeyn kara danba kama lahan!
Labo ayaa nah or taallee ha noo kala caddaato kaan qaadaneyno:
Inaan dowladnimo u gudubno oo dalkeena si sharaf leh aayihiisa qaab dowladeed ugu tashanno.
Iyo inaan cad cad qaab qabiil ugu kala jar jarnee maalinna Kenya la hoos galno maalinna Itoobiya.
Tags: Kismaayo yaa iska leh?, Warsame Gaabane	82 Responses for “Kismaayo yaa iska leh? W/Q Warsame Gaabane”
Ali Sanaag says:	October 9, 2012 at 12:30 am	muxuu ku hadlaaya qoraaga, wax la fahmi karo ma uusan qorin, Kismaayo cida iska leh waa la yaqaana, adiguna ina bari maysid, Gobol iyo Magaalo kala saar, Kismaayo ayaa iska leh, tan iyo intii laga kiciyey Gaala Madow, baa lahaa, Gobolkase ayaa u badan oo taas muran kama taagna, Soomaalina waa is tiqaanaa.
Suaal ayaan rabaa inaan ku Gebgebeeyo, Hargeysa Yaa iska leh saaxiib?
deeqa says:	October 9, 2012 at 12:46 am	kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kismanyo dadka deganka dagan aya leh oo taladeda korkama imankarto wa inay ayagu si cadalad ah uqaybsadan isuna mamulan walayaqan kismanyo dadka deegan ahan dagan marka kuwa xoga ku ordayana ama 21 di sanokusoodurkaya wa qaldanyihin dadka hadayraban magalada wa magalosomaliyed ee dadkoda hakamidnoqdan lakin shegashada qiyaliga masoconayso dhulka ilahay wuu uqaybshay umadisa qolaba mel ayalagu aburay oo degan ahan u ah marka kismanyo halagu heshiiyo soamli 2 wabi 2 bada dhulbered xoolo nool dhul baxad wayn hal af haldiin hal dhaqan macdan xidinimo iyo xigaal inta iyokabadan soomali horay ugu heshiin wayday. ilaahay hatuso xaqa
abdulkadir says:	October 9, 2012 at 2:07 am	ASC,
Waxaa maqan kaalinti wacyigelinti culumada & aqoonyahannada heer qaran. Taa waxaa daliil u ah caruurteenni waxaa lunsaday wadaad u eke dhanka kalane waxaa xiiso dhaliya midaan dawladnimo ra’yi fiican ka qabin. WBL-towfiiq.
Puntland boy says:	October 9, 2012 at 2:15 am	Kismaayo waxaa leh soomaali , Baryahaan waxaa ku soobatay Soomalida in Reer loogu magacdaro magaa looyin waa weeyn Soomaali oo dhana Dagan tahay, Waxaa larabaa tuulooyinkii loogu magac dari jiray odayaashii tuulooyinka in magaalo weyn loogu qaldo , Reer waa kubadan karaa magaalo waxaase qalada in soomaalida kale iska xijiyaan taasina waawaxa wadanku la degi layahay Dhulka magaadu kutaalo waa soomaaliya Qofku haduu soomaaliyahay See magaalada looga sheegan karaa ?waa wax aniga cagligeeygu fahmi la yahay Kismaayo waxaa leh Soomaaali
oo dhan , Viva Puntland & Soomaalia,
Cali says:	October 9, 2012 at 2:22 am	su’aashan waxaa loogu tala galay in dadka deegaankaasi la isku diro. Waxaan usoo jeedin lahaa milkiilayaasha raxanreeb inay hadalada kicinaya dalka ee abuuri kara fitnada aysan soo gelin webka. Sababtoo wax faaido ah umalaha umada.
nurudin says:	October 9, 2012 at 2:34 am	walaalayaal wadanka waa lakala leeyahay kismaayo hada maysan dhalan waxaay jirtay kismaayo 500 sano ayay jirtay markii i lah laga baqo waxaa guryaha magaalada iyo dhaqaalaha u badan qabiilka layirahdo soomaalida kale waa latirin karaa gur yaha ay magaalada ku leeyihiin markii laga hadlo jubada hoose waxaa soo raaca reerka labaad in wax laysku qaldo ma fiicna waayo reer kismaayo waa lays yaqaanaa waxaa kaloo wax ka degan oo kaluumaysato ah marka waxaan leeyahay iyo waa dhamaatay dhul boobkii CabdiYare says:	October 9, 2012 at 2:51 am	OK,
Kismaayo Yaa iska leh? Waa suaal fiican…..Laakiin kismaayo keliya ma aha.
Xamar yaa iska leh? Gaalkacyo yaa iska leh, Baydhabo yaa iska leh? ….Dhulka soomaaliya yaa iska leh?
Waa arrin in la isku baraarujiyo u baahan xalna laga gaaro si qof walbaa u ogaado xaqiisa & waajibaadkiisa
Somali says:	October 9, 2012 at 2:58 am	Anigaa iska leh
Abdalla says:	October 9, 2012 at 3:08 am	Acww, qoraagan markaan akhriyey qoraalkiisa, ugu horayn waxaan layaabay erayada afka qalaad ku qoran ma wuxuu u qaatay inay qoraalkiisa xoojinayso ama xaqiiqa kadhigayso? English eray lagu sheegaa ma wax qiima gooni ah leh baa, Englishka miyaa ka fiican afka Somaliga?
Waxay aniga ila tahay in qoraagu u fakarayo sida qof aan Somali ahayn, oo soo min guuriyey aragti ay dad kale ku dhaqmaan.
Waxyaabaha uu leeyahay waa lays hoos galiyey isagaa hadda qoraalkiisa waxyaabo is hoos galiyey. In koox ama qabiil hubaysan ay meel qabsadaan kuna doodaan inay leeyihiin iyo in dad deegaan dega ay waydiistaan in degaankaas taladiisa iyo waxa dantu ugu jirto wax laga waydiiyo waa laba arimood oo kala duwan, wadamada aad afkooda ku muujisay qoraalkaaga waxay leeyihiin in dadka dega degaanadooda iyagu u taliyaan. Dawlada Somaliya ma aha dawlad dhexe ee waa dawlad ay goboladoo dhan kawada tirsan yihiin, awooduna xamar kuma urursana, sidaa darteed soo jeedin bay ku leedahay arinta Kismayo ee wax magacaabid ah malaha, waalaga soo gudbay waagii hal meel amarku kasocon jiray ee dastuurka hadda u yaala wadanka dib u eeg. Madaxwaynaha iyo inta ku aragti ah waxay weli ku riyoonayaan in wax walba xamar laga soo yeeriyo taasna waan aragnay meesha ay Somali dhigtay. Hargeisa taladeeda reer Hargaysa ayaa leh, Kismayana sidoo kale. Haddii boqol qabiil ay wada dagaan magaalo iyaga waa in lawada hadalsiiyaa oo ay magaaladooda u tashadaan. waana laga yaabaa inaynu gaarno mar qofka Somaliga ah uu meel kasta oo Somaliya kamida hadduu degaan kanoqdo loo aqoonsan doono qof deegaanka ah.
Muwaadin says:	October 9, 2012 at 3:33 am	Hadaan si SAX ah maqaalkaaga kaaga jawaabo. Horaa Soomaaliya loo kala sheegtay!
Muqdishaa ugu horreysay cid iiga badneyd ma leh maantana gurigeygii kuma noqon karo. Sidoo kale Hargeysa iyo kuwa la midka ah.
Hadalkaagu wuxuu loo qaateen noqon lahaa haddaad Muqdisho iyo meelaha kale aad hore dadka ugu sheegi laheyd in aan lakala laheyn. Caddaaladdu ma KISMAAYO oo keliya lagu dhaqaa?? Maxaa iyada uun loo hadal hayaa? Aaway dalka intiisii kale? Haddii kuwaa iyo kuwa la midka ah la iga sheegtay, Adeer Kismaayo anaa leh….
Xagga ciidamada haddaan wax yar ka iraahdo, qodobkaa ayay la mid tahay. Haddii kuwa Muqdisho, Marka, Baladweyne iyo meelaha la midka ah joogaa nabadda xasilinayaan, kuwa Kismaayo joogana waa la mid. Haddii kuwaa Amisom la yiraahdo kuwa Kismaayo-na waa Amisom.
Goormay kuwa Muqdisho, Baadweyne iwm jooga Soomaalida noqdeen? Adeer waa kaa diidnay, adduunkana iyagaaba keenay oo wey garanayaan waddamada ay ka soo jeedaan, hadalkaaga adiga iyo inta kula fakarka ah maadaama aad hore u qabteen, in aad haddana isu sheegtaan waa waqti lumis.
ugu dambeyn haddaad wax noo sheegeyso hadal caqliga ku dhisan oo qabyaalad ka maran noola imoow, waxaas horaan uga soo daalnay, waqtina ha isaga lumin.
Ali soomali says:	October 9, 2012 at 3:35 am	Kismayo Somali oo dhan baa leh,waana ku ceeb iyo aflagaado in qabiil gaar ah sheegto.haddii ay ka badin weyso Habar-kuleey ayaa iska leh.
Kaalay_Murannee says:	October 9, 2012 at 3:59 am	Kismaayo iska Leh ——- Cid kale kama hadli Karto
Abdi Yare says:	October 9, 2012 at 4:10 am	Nin warkaan soo qoray anigu waxba waan kafahmi waayay maxaa yeelay sida wax loo qoro mayaano ayaan umalaynayaa. Hadaba sida akhristayaasha iga horeeyay ay sheegeen suaashu intaas wayka wentahay. Xamar yaa iska leh? Ama, ”waa suaal da’ weyn ee dalka yaa iska leh?”
Amina says:	October 9, 2012 at 4:29 am	War ninku muxuu ku hadlay afkii M/weyne Xasan buu meesha la yimi,Adeer mar horaa dhulka lakala degi jirey,waa su’aale maxa Xamartii magaalo madaxda ahayd nalooka sheegtay oo naloo soo cayrsaday anagoo shacab ah.Adeer B/weyne qabiilaa sheeta oo Xamar iyo Baydhabo dadbaa sheegta Hargaysa iyo Jawhar qabiilaa sheegta e maxa ku tusay qabiilada Kismaayo hadaysin caadifadi kugu jirin.Dowlada aad sheegeyso caawa haday Amison baxdo Villa soomaali baa loogu dhacayaa.mideeda kale civil war baa wadanka ka dhacay cid cid aaminaysa maleh nin Cadaado ka yimi ninka Kismaayo ku dhashay marabo inuu ku xakumo kii Puntland ka yimina kii Cadaado joogayi ma uu rabo inuu xakumo.marka iska naso Soomaaliya waa qabaa’il aan is rabine.
Cadaado says:	October 9, 2012 at 5:37 am	ASC, Warsame, walaal aad ayaad u mahadsantahay sida aad runtii u sharaxday “mowduucan” iyo waliba cinwaanka aad isticmaashay ee “kismaayo yaa iska leh”?. Aniga waxeey ila tahay in Kismaayo, Mogadisho, Cadaado, Jowhar, Hargeysa, iyo Garooweba uu qof kasta oo muwaadin Somali ah uu leeyahay, lahaanshahaas oo aan ka wado, in uu ku noolan karo, dagi karo, ka gancasan karo, wax ku baran karo iyo waxii la mid ah.
Runtii, waa dood loo baahan yahay, walaal, in dadka Somaliyeed lasoo dhex dhigo doodan oo kale, waxaan waliba kugula talin lahaa waa qoraaga in “Op-ed” kaan aad u gudbisid lana wadaagtid Dowlada Dhexe ee Somaliyeed, iyo waliba forum ka iyo joornaalada dadka Somaliyeed, maxaa yeelay tani waxeey wax ka tari in “dhariga la walaaqo” oo wax fiican ka dhashaan iyo wacyi galin ah in Somalida jahliga iyo u fikirka sida qoraaga sheegay “primitive humonid” iska daayaan. Sidee baa qabiil fulaan u dhihi karaa anaga ayaa iska leh magaalo hebel iyo gobol hebel? Warqada cadeeynta ah sidee loogu qori? lol, kkkk, mida kale, kaba soo qaad qabiilka in uu ka kooban yahay 50,000 amaba 100,000 oo qof, sidee beey is wadajir collectively ah u yeelan karaan intaasoo qof hal deegaan? Waa irrational, iyo in dadka Somaliyeed madaxa la isku galiyo, ilaa eey tagto jilib jilib hoose. Taas waa qatar la rabo in aan ka gaashaamanol. Si looga hortagana, waa in aan wax ku qabsanaa casharka uu walaalkeen si free ah ugu soo bandhigay dadka Somaliyeed.
Runtii, aniga si wanaagsan ayaan ugu raaxeeystay maqaalkaan, waana “logic, educational, and enlightening” Excellent job ayaan ku leeyahay walaal Warsame.
Ugu dambeeyn, waxaan rabaa in aan u sheego @ abdalla, walaal, qoraaga walaakeen isticmaalka uu isticmaalay ereyo English ah kama uu wado in uu ingiriiska qiimo gooni ah leeyahay, ee waxaad fahantaa in luqadeena Somaliyeed mararka qaarkood maadaama eey yar tahay inta sano eey jirto, in aan la heleeyn erey kasta in Somali lagu sheego, marka cashar culus sida kan uu walaalkeen meeshan kusoo bandhigay la qaadanyo. Saa u fahan, walaal. Dadkiinaan dhahay, ma fahmin waxa uu qoraaga ka hadlaayo, bal markale iyo mar sadexaad aqriya, waxaa laga yaabaa in uu iskool mar hore idinkugu dambeeysay oo maskaxdiina adkaatee, lol qaanuun says:	October 9, 2012 at 5:38 am	kismaayo hadda keenya ayaa leh
Shandile says:	October 9, 2012 at 6:34 am	Kismayo , waxa leeh , , , iyo Girgirta waxay yimaden 1850 kadib 1965 C/rashid aya u so raray doon Cali ah o bahi daradeen u yimi , kadib waxa yimi o dhul badan dhistay . Marka Kismayo waxa leeh majority for now.
Jamaame says:	October 9, 2012 at 6:57 am	Reer Kismaayo waxay ahaayeen kuwii magaaladoda ku soo dhoweeyay dadki faraha badna ee Xamar ka soo qaxay mana jirin cid laga sheegtay waqtigaa. Arrinka hadda la isku hayo ma ahan kala sheegasho ee waa ummad waliba halkey degto maamulkeeda haloo daayo. QABAA’ILADA DEGA JUBBALAND hadaad akhriso heshiiski SOOYA ee qabaa’ilada degaanka gaareyn 1924 waxaad arkeysaa inta qabaa’il ee saxiixday iyo xuduudaha ay ku heshiiyeen.
Reer Kismaayo xaq bay u leeyihiin iney diidaan inuu maamulo nin dool ku yimi oo dantoda iyo maslaxododa ka talineyn, sida INDHACADDE iyo reerkisa u dhaxleyn Marko cadey. War runta aan ka hadalno aaway caasimaddi ummaddu wada lahayd? Marka aan kala saarno dhul laka sheegto iyo in qolo kasto wada degta iney iyagu ismaamulaan. Somali Somali baa leh.
Abdul says:	October 9, 2012 at 8:07 am	Warka Warsame gaabane waxaan kaleeyay waxyar hakaraama seegin habaar laygu kariwaa warsamow Somali nadaamkii dawlad nimo seegatay rer walbana buulkii ay daganaayeen ayay maciin iyo dawladnimo bideen . Madax Wayne baan ahay waliba adoo curdana in aan gobalna iraahdo maamul fiican samaysta oo midooba kismaayana aan I raahdo maamul baan u samaynayaa war isqabta mahan taasna waxaan ka iri hakaraama seegina habr laygu kariwaa ,
Rerkismayo AMA jubaland samaysta maamul deegaanku ku midaysan yahay oo cadalada iyadoon cidna la dulminayn ,
abdi khadar says:	October 9, 2012 at 8:11 am	Waxaaan mahad weyn u jeedinayaa qoraaga maqaalka “Kismaayo yaa iska leh” uu ugu halqabsaday,Warsame Gaabane. Saxib Warsame “Legal personality” iyo “Normal Person” “Government Ownershib” “private ownership” oo kuligood ku tusaaya ama u taagan internationly recognised and standard legal terminolegiess laguna dhaqmo sida eey yihiina loo tixgaliyo,ayaa hadana waxaa jirta in, anigoo tixgaliyaaay wacyigalinta iyo baraarujinta uu maqaalkaagu xanbaarsanyahay, guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Jubooyinka iyo deegaanadii sida weyn eey saamaynta uga yeesheen dagaalaadii sokeeye ee dalka ka dhacay iyo dhaqankii foosha xumaa ee laga dhaxlay,maqnaanshaha dowlad dhaba oo ka turjunta rabitaanka, xaqa iyo xaqiiqada bulshada waaqica aay gashay ayaa keenay in dadku eey sheegtaan deegaamadooda, markii jabhaddo hubaysan oo qaab qabiil beeleedyo isgarabsaday ama waji xisbiyo Islaami ah hantidoodi iyo deegaamadoodu looga boobay lagana bara kiciyey iyo boqolaal kumaan iyo malaayiin ah, xeryha Ifo iyo dhagaxle, Xagardheer dheer Dhadhaab eey daad sanyihiin iyagoo diif iyo darxumo la ildran. Gaabanow sharcigu ma dhulkii laga bara kiciyay ninka raba in uu ku laabato ee aan cidna keedii ugu tagin miyuu qabanyaa mise kan kun maly ka xagga ka soo dhaqaaqay. salaam.
waxii aan qalday waa la iga saxi karaa.
Somaland Hero says:	October 9, 2012 at 8:24 am	Kismaayo Soomaali baa ilaa hada leh , laakiin haddii khilaafkani sii socdo kiinya yay ku danbaynaysaa ee ha lagu heshiiyo intay goori goor tahay…
Abdi Abdullahi says:	October 9, 2012 at 8:50 am	qoraagu sida uu uqeexay kismayo inay muqdisho lamid thay , haduuba saas oogu gartay oo ay katahay xaqiraad muxuu udiidayaa in heerka degeen ahaan iskaleh in ay maamulaan sida muqdisho oon og nahay in ay xataa guri kulahayn wakhtiyada qaar ay udhahaan UNUGAA ISKA LEH cadaalad hadaysan somali samayn aniga maanta indhahaygu waashan HIIRAANBA, BARI BAAN DAGI JIRAY oo maalin la idhaafshay la iguna xasuuqay walina wiilkii malintaas hooyadii wabiga lagu riday waa u nool yahay xaqiiqdu waa in xaalka dhabta ah la arkaa, XOOG IYO XEEL LABADABA DIYAAR SOMALAY
Kismayo33 says:	October 9, 2012 at 9:25 am	Kismaayo waxaa iska leh cidda Hargeysa, Garowe, Muqdisho, Lascanood iwm iska leh.
Somali baa leh.
Waxaa dega oo ugu xoog badan beesha Ogaadeen.
Beelaha, , , , iwm dhulka ay deggan yihiin waxaa iska leh Somali nation. Waxay leeyihiin manfaca dhulkaasi keliya.
Qoraha oo ka yimid Gedo, muusan samayn caddalad mana aha nin waddani ah oo ka run sheegi kara maamulka Kismaayo cidda iska leh waa . Iyagaa u badan degaanka iyagaana mudan in looga dambeeyo maamulka dhulkaasi,.
Buuqan iyo jahawareerkan ay mooryaanta Galgaduud waxay ku tusinayaa sida ay u yihiin rag boob u socda oo marna shabaab wax ku booba, marna dooxada Jubba marna walaalaha galgaduud.
Wakhtigaasi waa la soo dhaafey. Jubbaland gaar ahaan Kismaayo, Afmadow, jilib, Badhaadhe, Dhoobley, Diif, Bu’aale, Saakow, iwm waxaa u badan iyagaana u dagaalay oo shabaab ka xoreystay. iyagaana maamulaya. Cid ay uga haybaysanaayaana ma jirto
Puntlander man says:	October 9, 2012 at 9:34 am	Kismaanyo yaa iska leh. Caqli foorara dheh. Waa sheekadi muqdisho sanooyin badan ay khad cagaaran ku lahayd dhamaan kaba yashii dhaqaale sida garoonka iyo dakada ee magaalada 15 sano on ka badan aysan u shaqayn jirin. Kismaanyo waxaa leh dadka somaliyeed ee ku nool. Cajiib Xamar. Baydhabo Guriceel, Jowhar iyo boosaaso yaa leh. Meel kasti qofkii maanta ku nool baa leh. Kaliyana waa in nabad ku wada noolaansho laga shaqeeyaa. Hadii ay noqoto dadka jubooyinka ka hor istaag inay nidaam dawladeed samaytaan oo iyaga matala Ogow adigana. Dowladnimo somaliyeed muqdisho la joogo maysid ee ka cidee calafka ayaa imaan ilayn kuu ma arko Inaad imatashid Qaranimo. Kaliya dadka jubooyinka waxay u bahan yihiin in laga shaqeeyo dowladnimadooda. Maahan in aan waligeen ku jirno cayaartii ma dhamaato. Viva Puntland. Jubbaland and Somaliwayn
Abdinur says:	October 9, 2012 at 9:37 am	Sida wax loo qoro ayaaaba ka qaldan qoraaga maqaalka, hadal badan oo aan macno lahayn. “Kismaayo waxey la mid tahey Baydhabo, B/Weyne, Muqdisho iyo Jowhar iyo Cadaado iyo Gaalkacyo.
Xagga sharciga Islaamka iyo xagga xeerarka dowladnimadaba” meeqo IYO ayaad meesha ka qortey?
wadaad yare says:	October 9, 2012 at 9:39 am	Walaal Cadaado
Waad ku mahadsantahey commentskaaga. Raxanreebna way ku mahadsanyihiin iney soo daabaceen. Markaan anigu ka doodayo arrimaha la isku khilaafsanyahey ee bulshada ama diinta boogta kama leexdee waan taabtaa. Markaasna dad badan iney damqadaan oo si irrational ah u dhaqmaan ayaa dhici karta.
Dhibka kala heysta ruux emotional hysteric ah oo kacsan iyo qof isku deyaya inuu arrinta si cilmi ah uqaadaa dhigo waa mid badan. Sida aad ka aragto commentska dadku qoreen.
Waxaan u isticmaaley cinwaanka provocative kaa inaan soo jeediyo dadka baraaruggooda. Laakiin waxaad mooddaa iney dhiigga ku kicisey dadkii oo ay xirantey foculty of thinking. Su,aashu waxey tahey u baahan in aan fahanno maxaa dhammaan ama inta badan group of people ka dhigaya iney isku si u fakaraan hal mar iyadoo sidaasina qof kastoo deggan uu arki karo iney qalad tahey?
Waxaan qafaal ugu jirnaa wax la yiraahdo “collective intelligence” oo ah inaan si koox koox ah u fakarnee aannan si qof qof ah u fakarin.
omar says:	October 9, 2012 at 10:21 am	ADEER JUBDA HOOSE WAXAA ISKA LEH SOOMAALI LAKIIN WAA LOO KALA BADAN YAHAY AMA JUBOOYINKA ARINTAAS MURAN KAMA JIRO WAA DHUL SOOMAALIYEED LAKIIN WAA LOO KALA BADAN YAHAY MARKA HADLKU INTAAS AYUU KU YAR YAHAY
Zack says:	October 9, 2012 at 10:24 am	ASC dhamaan, marka hore ALLE ayaa mahada leh marka xega Qoraha maqalka Warsame .Runtii qofkii si xeel dheer u aqriya maqalka wax uu fahmayaa arinta ma ahin QABIIL BAA LEH MAGAALO . WAA AQOON LA,AAN DADKA HEYSA OO WAX AQOON AH AAN LAHEEN QOFKA HADII UU AQOON LAHEEN MACANHEEDO WAA IN U WAX WALBA OO AAN SHARCI AHEEN UU SI FUDUD KU AQBALAA, KA WARAN NINKA MAANTA JOOGA UK MISE ARGAYA SHARCIGA IYO NIDAAMKA DOOWLIGA AH SI UU U SHAQEYNAYA IYO SIDA BULSHADA U NOOSHAHAY IYO SI UU U SHAQEYO DABADEENA KU DOODAYA MAGALADA QABIIL HABEL AYAA LEH , WA NASIIB DARO , 200SANO AMA KABADA OO XAGA AQOONTA AH AYAA NA HEYSA , PLZ WALAALAYAAN ILMAHAADA KU DADAAL IN AAD AQOON FIICAN BARTO SI MUSTAQBALKA WADAN U BADBADIYAAN . THNX
Fubi says:	October 9, 2012 at 10:49 am	Kismaayo waxaa iska leh dagaan ahaan cida kabadan marka dadka kale ee dagan oo dhan la isku daro. Taasna waxaa lagu ogaan karaa markii tirakoob dhab ah lasameeyo. Inta ka horeysana kismaayo waxaa iska leh khaas ahaan dadka hada dagan guud ahaana waxaa iska leh Soomaaliweyn.
lee gaas somaliland says:	October 9, 2012 at 12:09 pm	hargaysa waxaa iskale iyo qaar kaloobadan kkkkk
YAAB IYO AMAKAAG says:	October 9, 2012 at 12:17 pm	RAXANREEB YAA ISKA LEH??
Joorre says:	October 9, 2012 at 12:25 pm	Waxa meesha ku qoran waa Canrabaqash aan tayo lahayn oo aad moodo inuu qoray cunug yar oo dugsiga hoose dhigta. Fadlan Raxanreeb wax la aqrisan karo oo fariin muhiim ah xambarsan inoo soo gudbiya.
Xamar yaa iska leh? bay ku habooneyd suaashu . Caasumadii hore ee dalka baa hal Qabiil sheegtay, oo hadana boobay hanti Qaran iyo mid gaar ahba, dadbaa ilaa hada xaaraan ku dagan guryo aysan lahayn.
Meeshii aad raali galin ka bixin laheydeen baad hadana Kismaayo yaa leg iyo suaal aan meesha ool ku mashquulaysaa.
Waxaa in la idin xususiyo mudan in Muqdisho ay qabteen Ugandays Baydhabo Ethiopian, Baladweyn Ethiopian. Kenya maxaa idin tusay hadaysan ahayn cudad qabiil?
Dalku waa federal dowlada Xasan Shiikhna haba yaraatee wax faragalin ah kuma sanayn karto arinka jubooyinka, maamul usamaynta gobolkan waa mid u taal dadka dagaanka ah.
wadani says:	October 9, 2012 at 12:26 pm	Qoraagu waa aqoonyahan,si aad u fahamto hadalkiisa waa in aad aqoon leedahay,ama qof kugu dhaama kuu fasiraa,Kismaayo kama duwana magaalooyinka kale aniga fikraday laba dhib ayaa haysta iyagaana iska soo bixi doona.1-Dad raba in ay Muqdisho iyo dawladaba madax furasho u haystaan ayaa u arka in ay Kismaayo tahay meel la tartami karta siyaadsan ahaan iyo dhaqaale ahaan,tusaale hadaad rabto waa dadka ku hadaaqa reer puntland Bosaaso ayay leeyihiin anakana xamar.marka ma iswaydiiyeen waxa u dhaxeeya dawladnimo iyo maamul goboleed.magaalo goboleed iyo magaalo madax,waxaan kale oo idin xasuusinayaa waa isla dadkaas kuwa diidan Muqdisho halaga badalo magaalo madaxda oo ha idiiin noqoto magaalo gobol.2-Dadkii Somaliya galiyay dagaalkii sababta u ahaa burburkeena 77,kadibna inta AK 47 kurida Ethiopia kasoo carara taas oo keentay in 21 gii sano ee lasoo dhaafay in Ethiopia ay la dagaalanto dawlad kasoo if baxda Somaaliya,iyada oo kaashanaysa reer galbeedka neceb muslinka gaar ahaan dadka afsoomaaliga ku hadla. Dadkas aan idiin sheegayo waxay wax ka dagaan jubooyinka waxaana saameeyn wayn kuleh fara galinta Ethiopia iyo Kenya.walaalayaal sida qoraagu u sheegay hadaan la helin cadaalad iyo wax wada qaybsi iyo sabir eexda iyo sad bursiga iyo nin jeclaysigana la iska dhaafin walee waa la is waydiin doonaa meesha aan ku dambayno.
Jihaan says:	October 9, 2012 at 12:53 pm	Kismaayo cida leh waa la garanayaa, qabiilka lehna waa qabiil somaliyed,
Bosaso boy says:	October 9, 2012 at 12:56 pm	Ninkaan hada maxuu qoray adeer wadanka waa lakala leeyahay nina nin dalkiis ma sheegan karo Xamar oo ahayd casmadii Somaliyeed ayaa beel xoog ku qabsatay waxii umad ku noolana way xasuuqeen ilaa hada way haystaan .
Bosaso waxaa dega qabiil nin xamar iyo jawhar kayimid ma sheegan karo baydhabo waxaa dega qabiil aniga oo reer bosaso ah ma sheegan karo hargeysa waxaa dega qabiil nin xamar ah ma sheegan karo maxaa ka duway kismaayo kismaayo iyada mawaxaa degan quraanjo miyaysan qabiilo deganayn , kismaayo in dhoocil kasta sheekato waxaa gaarsiyay dadka dega ee beesha darood .
waxaan leeyahay wiilasha qabsaday kismaayo ee absame ama ogaden adeerayaal kismaayo gacantiina ayay ku jirta waxii isku daya in ay gacantogaaleeyaana afka cag ka geliya wixii aan udhalan kismaayo oo an darood ahayn haka xirixirtaan boorsooyinkooda awalba waxay ku tageen faduul , Somalia wax la yiraahdo ma jirto wadanku waa Dawlado ku midoobey somalia waxayna somalia lamid tahay sida jamacada carbta oo kale somalia waa wax lagumidoobay oo dhanka luuqada ah balse maaha dhulka ninkasta dhulkiisa usagaa iska leh aniga puntland ayaa dega bal waakaas yaa ku dhaca oo sheegan kara bosaso deeqa ama garoowe ama baran ama galkacayo war miskiinimada la idinka arkay ee difacda degaankiina
Jihaan says:	October 9, 2012 at 12:58 pm	Anti-rer garas ayeey wadaa dowladan ngo aha ,cos of beydhabo rer hebel aya leh wan ogolnahay ,b/weyne rer hebel waan u ogolnahay, muqdisho rer hebel aya leh, kismaayo s0mali oo dhan baa leh micnaheedu waxa weeyan , degan uma ogolin iney gaar u yeeshaan.
Jihaan says:	October 9, 2012 at 1:05 pm	Somalia 100yr before qabiil kasta suldaankiisa ayaa maamuli jiray ,wax madaxweyne iyo dowlad la yiraa ma jirin, dowladan shaadh qabiil ayey huwantahay ,waa usc iyo ilkayar oo wada socda oo dhul eysan laheyn doonaya iney qabsadaan, waa in il gaar ah lagu eega.
Puntlander man says:	October 9, 2012 at 1:41 pm	Somaliyey waxaan usoo joognay iyadoo burburinta qaranka lasiyay magaca tuurista heeryada gumaysiga oo dad muwaadidniin ah lagu bara kicinayo dhulkaan uma dhalan waxay hanti lahayeen lagu xalaalays tay. Xassan wuxuu dhawaan sheegay inuu kismaanyo booliis iyo nabad Sugid u dirayo. Cajiib xaalka Xamar yaal waanu xaal og nahaye ma wuxuu soo wadaa wixii ka haray Dooxada Jubba (walaalaha galgaduud) Walee fikaradaha qaarkood fulin tooda Somali way ku burburtay hadana dhulka umada kale ayaa nagala wareegi doona. Waxaynu soo qaadanay casharo ah qabiil toos isu laayay qabiil shaar diimeed gashaday hadana waa fikarado qabiileed oo loo garaacayo durbaan wadaniyadeed. Ma ku fakartay Inaad fahanto dadka ka cararaya. Koobnaadta awoodo dawleed inay ku urursan tahay meeldhexe. Ama Kan ay ka dhuntay sheegashada Somalinimo. Waxa keenay waa dhibta dhexdeena ka dhacday. Daawayn teedu waa in la is dhagaysto oo caqliga laga shaqeeyo. Ee ma ahan wixii 22 ka hor qaranka lagu burburiyay in lasoo celceliyo. Ogow askariga Kenya kan Uganda Ama Ethiopia wuxuu u jooga danaha qarankisa ma ahan Inaad mid sokeehe ka dhigtid midna shisheeye. Magacyo kasta oo aan isku dilo mid diimeed, qabiil iyo gobol ma dhamanayso faragalin shisheeye. Casharada nasoo maray waxaa ka mid ah koox dadka ku dagaal galisay Ethiopia baa naqab sanaysa oo ay u dhinteen kumanaan markii kursiga lagu fariistay tageeradi ugu horaysay Ka doontay waxay shalay cadow ku sheegi jireen dad iyo dalna ugu burburay. Yaab dhamaan ogaa nacayb Ethiopia . Iska fahan inaan Ethiopia la nebcayn. Ee nacayb ku socdo qayb Somali ka mid ah. Somali hakala tagto umad kala tagta uguma aynu horayn. AMA caqli ha shaqeeya Hana la waxay ku wada socon karto. Hagu laysteen inte daacadaa. Aamin
Saxarala says:	October 9, 2012 at 1:45 pm	Asc waxaan aduunyo iyo akiro seeg ah nin inta dhuölkaiisii asl ahaan u dagaan inta laga so cariyay dhulka deegaano usna dagin xoog raba in u ka qaato oo yirahdo aniga leh , runtii maata somali
waa is waxay is dilaysay 20 sano in walbana dhulkii u ka so jeedo ha aado han imanasdo cid cid ka
xoog badan ma jirto hadii somalinimo aad u dagyso wa agooni laakin sheegasho dhula adan laheen cid kaa yeelssa ma jir.
wadaad yare says:	October 9, 2012 at 1:46 pm	Aqristayaashu way mahadsanyihiin. Waanan aqriyey comments kooda oo dhan. Hal halna ugama jawaabi karo. Laakiin si guud hadaan u hadlo su,aashaan ayaan weydiinayaa dadka naqdiyey maqaalkeyga:
Si loo qiro in Kismaayo tahey magaalo qabiil hebel leeyahey maxey tahey in la sameeyo?
Ma in dad reerkaas aad sheegeysaan ah madax looga dhigo ayaa arrintaas lagu xaqiijin karaa?
Haye waa la idinka yeeley oo nin qabiilkiinnaa ayaa guddoomiye looga dhigey Kismaayo sida Tarzanba Muqdisho guddoomiye ugu yahey? Degmo kastana dadka u badan ayaa share kooda laga siiyey. Waxa sidaas sameeyeyna waa dowladda Soomaaliyeede Kenyana ma ahan, hal qabiil oo shireyna ma ahan, maleeshiyo beeleedna ma ahan. Intaas ma ku filantahey in aad ku qanacdo in beeshaadu ay leedahey Kismaayo?
Haddey haa tahey isku meel baan wax u wadnaa ee yeynan meel cidlaa ku kala dhiman oo iimaanka is geli.
Haddeyse tahey arrin kale oo aan taas aheyn maxey tahey waxa qaladkaa oo maqaalkeyga ku jira?
Jowhar says:	October 9, 2012 at 2:55 pm	Baydhabo yaa leh? Jowharse yaa leh. Maxaa cinwaan looga dhigtay Kismayo oo looga hadli waayey Somaliland ? Taasi macnaheedu waa Dooxada Juba ayaan soo celinaynaa.
mahad says:	October 9, 2012 at 2:59 pm	qoraagu suu u fiicnaa buu markii danbe fikirkiisa iyo rabitaankiisa ku base-gareeyey arinta kismaayo waxaadna moodaa in weerarku uu dhan ku wajahanyahay any way waxaan dadkaa walaalahaa ilaahay uga baryayaa in bogooda burcad isku mariyo. dawladana waxaana ugu baaqayaa arintaan si cadaalad ah ay u wajahdo.
Amina says:	October 9, 2012 at 3:29 pm	Qoraagu waxan u gartay inuu rabey in uu dad badan dhiiga ku kariyo oo aan ka midahay,Soomaaliya waa ay kala tagtay nin walbana meeshii uu asal ka soo jeedey ayuu xaarxaartay.Tusaale Xamar waa meeshii mood iyo maal waxan lahayn aan u hurnay hadaan nahay Beesha Daarood hadda’na guryahayagii Ninbaa qori la horfadhiya kii sheegtana dhabarkaa laga tooganayaa.boogtii naga soo gaartay Xamar baan weligeed na bogsoon doonin marka waxba yaan lagu darsan ninwalba degaankiisa howtashado hana lagu wada heshiiyo Dadka Ilaah meesha ku wada abuurayow.
cadaalad says:	October 9, 2012 at 3:54 pm	Nin bosasso qabiilkisa lagu yaqaano sida uu kismaayo sheegan karo ma aha wax soomaali inteeda kale fahmi karto????? Hade waxa ay la mid ta,hay reer jabuuti ama reer somaliland oo sheegta kismaayo. Ayagu ma sheegtaan gobolada koonfur in leeyihiin.
garoweboy says:	October 9, 2012 at 3:58 pm	kismaayo waxaa leh somaali cidkale masheegan karto walaa kenya iyo ethiopia
Puntland boy says:	October 9, 2012 at 4:46 pm	Qoraaga soo labanoqday , Ma soomaalibaa maanta ku fakaraysa in Xamar talo & Dad lagaaga soo diray ineey ku maa mulaan ? Marmar waxaan ku fakaraa Soomali In loo kala fududeeyo, Jubada hoose & Gedo waxaay isku noqonayaa Maamul goboleed wada hadalkoodiina waa socdaa iyadoo international community aay sponsor gareeyeen mardhowna waxaa lagu dhawaaqayaa jubaland State Xamar iyadu ha is maamusho inteeysan kafakarin waxa kasocda Jubaland , Jubaland nina umabaahna ilaah mooyee Waxaa lawadaa city planing moderate lana jaan qaada magaalooyinka caaanka ah Kismaayo waxaa laraajeeynayaa 2 Sano gudahood in la isugu keeno dadkabadan 3 million insha alah
Marka Xasan & Guruubkiisu Xamar ha maamulaan , Viva puntland , Jubaland & Soomaalia
PUNTLAND ONE says:	October 9, 2012 at 5:31 pm	asc wllo yaal aad ayaan ula yaabanahay DADKA MALAHA DADKA CAADIFADAA KA TAN BADISAY KISMAYO SOMALIYAA LEH OO WAA MAGAALO SOOMALIYEED HADAAD QABIIL AHAAN ULA JEEDONA DAAROOD AYAA UGU BADAN DADKA HALKAAS DAGA SIDA MAGAALADA MUQDISHO HAWIYE UGU DHANYAHAY AYAA DAAROOD KISMAANYO UGU DHANYAHAY WAA MAGAALO DAROOD SIDA JIGJIGA BOSASO GARBAHAARAY GAROWE GALKACYO IYO DHAMAAN DEEGAANADA BEELAHA DAAROOD EE GEESKA AFRIKA OGAAD JUBBLAAD DAAROOD UUN AYAA KU MURANSAN LAKIIN XASN SHEEKH MALAHA JOWHAR AYUU U HAYSTAA KISMANYO WAXAAN ORAN LAHAA KISMANYO WAXBA UGAMA DUWAN BALADWAYNE IYO BAYDHABO MAXAA WARKA LOO BUUN BUUNIYAA KKK CAJIIB MAAMULKA HADA LAGU SAMAYNAYO NAYROOBI AYAA MTALA DADKAAS
musdaf says:	October 9, 2012 at 5:56 pm	sxb dadku ma ahaan isku dagaane waa isku marti oo dadka dagan kismaanyo ee aan ahayn absame waa marti hoosjogo kismaana waa magalo taasnah cidkahadli kartaa majirto cidii uu kahayo hungurinah sidii shabaab loogalay baa loogali hayaa sxb dowlada somaliyana waa fadaraal nin walbanah waxuu leeyahay gobolo iyo dagaan muqdisho waa hargaysa waa kismaanyo oo boosaaso waa baydhabo waa 5ta oogu waawayn somalia
aliabuu says:	October 9, 2012 at 6:07 pm	KIS MAAYO WAA MAGAALO SOO MAALI LAAKIN HADA WAXAA MOODAA IN AY IS LAHAYSIINAYAAN
HORTA SHAQO KUMA LAHA KIS MAAYO WAXAY KA DAGAAN XAAFADA CALAN LEEY OO IAYA HG DAGAAN WAXAA KUU SOO HARA WAXAA UGU SOO SOKEEYA AFMADOOW HADII CIDI SHEEGA NAYSO WAXAA SHEEGAN KARA GAALJECEL IYO OO SADEX DAAS MIYAGA U BADAN HABA LOO KALA BADNAADEE COOR MALANA WAXAY KISMAAYO KA XIGAN DHINACA KIINYA GAAL JECELKII IYO SHIIQALBA KU DOO DI MAAYAN ANNAGA AA ISKA EH MAXAA KEENA KISMAAYO RUN TII WAAD YAQANA WAXA SOOMAI TAHAY QABIIL KO DUNA WAXAY KU DHA HAYAAN ANAGU WAXAN NAHAY REER WAAMO AA LOO YAQAAN DADKAAS MARKA NIN QABIIL KA BUUXO DADKII INTAAS SANO DAGANAA MA WANAAG SANA IN UU KALA DHEX DHIGO AANO QABIIL WAXAA KUU SOO HARA WAA DADKA INTA AAN ANIGU KA ARKAY UGU BADAN KIS MAYO GURYAHA KU YYAALA
Cadaado says:	October 9, 2012 at 6:43 pm	ASC, dhamaantiin, iyo Raxanreeb Media, iyo walaalka mowduucan keenay. Oo aan 100 % ku raacasanahy sida uu iskugu dayayo in uu dadka Somaliyeed meesha wanaagsan ku toosiya
Markale, Kismaayo iyo magaalo kasta oo Somalia ka mid ah waxaa iska leh Somali oo dhan. Sida uu qoraaga sheegay. Ma dhib badna in hada ayadoo wax badan la xeerinayo in dadka deegaanka sheeganyo, amaba si kala hadaan u dhaho, Axmed Islaan, Axmad Madoobe iyo nin qof Raaskaambooni ka tirsan Gudoomiyaha gobolka laga dhigo. Waxaan aniga aaminsanahy in Ahdmed Madoobe uu ka duwan yahay qabqablayaasha kale ee Xamar jooga, sababtoo ah waa wadaad, qeeyb ka qaatay hada iyo ka horba in dadka meesha wanaagsan lagu hago. Waan ognahay, in eey qabqablo oo dhan leeyihiin “hadii Ahmed Madoobe dowlada lagu daro, anagana hanalagu daro. Taas waa in aan laga yeelin.
Dowlada dhexe ayaa laga rabaa in eey door ka ciyaarto sida Somalia oo dhan, iyo goboladeeda kala duwan loo maareeyn lahaa. Oo eeysan dhicin in Kenya amaba Ethopia eey dadka Somaliyeed kusii cararaan. Waxaana siyaasadaas foosha xun dhiira galinayo waa Qaswade Faroole, oo hada raba in uu arrinta Kismaayo kusoo ganbado oo wax ku arbasho, asagoo dowlada dhexe kasoo hor jeeda. Taasna waxaa laga rabaa in eey Dowlada si fiican ugu shabadeeyso qaswadaha uu yahay Faroole. Qaswade Faroole iyo kuwa ku fikir ah ayaa raba in eey cuuryaamiyaan Dowlad ka dhalato Somaliya, taas badalkeeda waxeey ficiladooda noo muuujineeysaa in eey rabaan in eey dhiira galiyaan in dadka Somaliyeed inta magaalooyin iyio dhulal kala sheegtaan isku laayaan, markaasna eey ahaato nolasha qofka Somaliyeed mid ah “Nasty, brutal and short” oo ah in uu qofka Somaliyeed u noolaado si waxuushnimo, fool xumo ah oo aad u gaaban inta yarta oo uu nool yahay.
Kuwiina dhahaaya amaba ku celclelinaya Xamar ayaa nalaga heeystaa, iyo guryo, waxeey ila tahay in aad fuquro tihiin oo aad wax hanti laheeyn balse aad afka ka sheegataan been. Sababtoo ah, markale aan idin sheegee, Xamar waa taas umada is dhexgashay long time ago (ma ahan wax hada biloowday) oo eey dadka jooga Xamar maantay la is dhaheeyn halkee ka timid iyo yaa tahay. Prime Ministerkii hore Farmaajo si siman oo dhan loogu dabaal dagayay, Prime Ministerka cusubnaMr. Abdi Farah Shirdoon sidaasoo kale dadka ula dhacsan yihiin. Xamar waxaa hadadan ku sugan xildhibaanada Dowlada oo cid walba leh, gobol kastan ka yiimd, sidoo kale, waxaa ku sugan oday dhaqameedyayda Somaliyeed oo dhan, iyo qofkasta oo amaba dan u yimid, amaba ka shaqeeysa ama raba in uu ku noolaado.
Marka walaalayaal, beenta dadka halaga daayo, Mogadisho iyo Kismaayo iyo magaalo kasta waan ku wada noolaan karnaaye. By the way, qofkii raba in uu Cadaado yimaado, ku noolaado, amaba xil ka qabto, waan soo dhaweeyneynaa, oo ha u tartamo, oo dadka hadii eey doortaan xataa madax haka noqdo, wax qabad iyo kartida qoka aan xisaabeeynaa, ee ma xisaabeeyno “yuu yahay” oo ah fikir “outdated” amaba duq ah. Waa mahadsantihiin.
abdal aziz says:	October 9, 2012 at 7:26 pm	soomaalidu waxay ku maah maahdaa shimbiriba codkeed ciday mr warsame gaabane horta bal maxaa adiga kaa galay kismaayo? iyo cida iskal leh toona???? saaxiib kismayo waa magaalo somaaliyeed oo lamid ah magaalooyinka kale ee ku yaala dalka soomaaliyeed waa hadaad rabtay barashadeeda cida iska lehna waa laguu yaqaan, sxb waxaad tusaale u soo qaadatay labo qof oo midna idhaha la.yahay midna dhagaha la,yahay siday isu fahmi karaan? that is okey you right they con,t undarstand each other laakiin soomaalida oodhan ayaaba indhaha iyo dhagahaba waa hore beeshay hadana adiga waxaa kuu dheer garashada ayaad la,dahaye bal horta kahadal caqliga binu aadamka gali karamatahay kismaayo yaa iska leh , aanse adgiga su,aal ku waydiiyo yaa iska leh hargaysa/ baydhaba/ baladweyne/ muqdisho/ garoowe/ boorame/ ???????? dadka daganse ma ingiriisbaa mise waa qabail soomaaliyeed????? sxb caqligaaga bal ka shaqaysii sharciyada aad ka hadlayso iyo dawlada aad ka hadlayso mahan mid kismaayo ay banaanka katahay iyada yio dadka daganba waxay ka mid yihiin jamhuuriyada soomaaliya cadaalada aad ku celcelisayna xaq ayay u leedahay kismayo iyo dadka ku nooliba; so you have to know who you are and what is your cabsty on the groun???? be ation when you writing like this coments ”;;
Hilowle Abdi Osman says:	October 9, 2012 at 7:39 pm	war wuxuu mu ka hadaaqay
wARYAA MA OGOSHAY IN AAN Muqdisho kula yeesho.
Ku lahaa maleeshiyo qabiil.OO xageed ku maqneyd marky alshabaab la dagaalamyeen ee dhiigooda hurayeen ma hadaad rabtaa in aad xaqooda duudsiso.
Halkaas waxaa ka cad in aadan u dhalanin deegaanka waayo hadaad u dhalatay waad dagaalamihi leyhd sida xaq udirrika RAASKAMBOONI,
DOWN MORRYAANTA XAMAR EE KU QABSO KU QADIMEYSIDE KU JIRA HADANA SHAATI DOWLO SOO XIRTAY
Ahmed Jama says:	October 9, 2012 at 8:06 pm	Waxaa aad la yaab u leh in meelaha qarkood la yirahdo dadka degaanku maamul ha soo samaysteen sida Hiiraan oo la ogyahay dadka degan maxaa keenaya in Jubada hoose lagu murmo, waa la ya
Ahmed Jama says:	October 9, 2012 at 8:09 pm	Waxaa aad la yaab u leh in meelaha qarkood la yirahdo dadka degaanku maamul ha soo samaysteen sida Hiiraan oo la ogyahay dadka degan maxaa keenaya in Jubada hoose lagu murmo, waa la
yaqaan dadka degan ha laga daayo faragalinta guracan ee ay wadaan dadka qaarkood arrintaas hadii aan laga fogaan ama taxadarin waxay keeni doontaa cawaaqib xumo, Somaliyana waa la kala degaan lakiin qof kasta oo Somali ah wuu ku noolaan karaa lakiin mamulkeeda dadka degaan ayaa leh sida gobolada Waqoyi Galbeed iyo punland oo kale.
axmadeey says:	October 9, 2012 at 10:04 pm	Ninka maqaalkan qorey waa nin wax badan og laaiin ujeedo gaar ah ayuu kaleeyahay maqaalka. waxaan saas uleeyahay waxaa jirta maahmaah soomaaliyeed oo dhahaysa ;Caada qaate waa nin weyn oo isyeelyeeli, waxaan ula jeedaa ninku wuxuu rabaa inuu iska dhigo inuu u hadlayo si soomaalinimo iyo dhaxdhaxaadnimo ah. Laakiin wuxuu sicad qalinka uga leexleexinayaa inuu yiraahdo Kismaayo dadkii majooriti ahaanta udaganaa maamulkeeda ha yeeshaan dadka kalee soomaaliyeedna sidey doonaan ha,ugu noolaadaan. Xiligan Soomaaliya waxa kajira waan wada ognahay, majirto magaal ama maamul aysan reero goonihi ku magacawneyn. Ddkaas ayaan looga dambeeyaa maamuladooda dadka kalee soomaalyeedna wey iskaga noolyihiin. Tusaale ahaan caasimadii dhameyd ee soomaali oodhan wada dhisatay maanta maamulkeeda iyo daganaanshaheedaba reer gooniya oo soo maaliyeed ayaa leh cid kalana wax lagama siiyo lagamana qeybgeliyo, laakiin cidi kale ee rabta ineey kunoolaato wey u furantajhay. Caasimadii labaad ee soomali laheyd reero soomaaliyeed oo gooniyabaa caasimad kadhigtey cidkaloo soomaaliyeedna wax shaqo ah kumaleh. Marka hadii aan nuxurka qoraagu aheyn reerahaas soomaaliyeedna xaqbey uleeyihiin ineey degaanadooda iyo magaalooyinkooda lahaadaan laakiin magaalada Kismaanyo cid kastey kadhexeeysaa waxey ila tahay inaaney suuta gal aheyn xaqna aheyn. Laakiin fikirka qoraagu ma,aha wax kaligii kaguuxayee waa guluf ay wadaan qeybo soomaalida kamida oo aan arki karin maqlina karin in qaybo kaloosoomaalida kamida uu wax wanaag, ihi usoo kordho.Laakiin waxaan kula tali lahaa qoraaga iyo inta lfikirka ahba in,aan dadka qaarna wanaaga lala jeclaan kwa kalana lala necbaan. Mar kastood wax qoreysana aad xikmad adeegsatid ood si isla,eg uga hadashid soomaalida iyo degaanadaba.
A.Gardaad says:	October 9, 2012 at 10:11 pm	Wadaad Yare
Saaxiib sidaan u malaynayo niyaddaadu way fiicnayd oo waxaad is lahayd dadka fahamsii in dhulka soomaaliyeed uu soomaali oo dhan ka dhexeeyo shisheeyana uusan aayihiisa shaqo ku yeelan karin, LAAKIIN marka la fiiriyo qaabka aad wax u qortay, tusaalaha aad dooratay (kismaayo), iyo maskaxda dadka soomaaliyeed waqtigaan la joogo, waa la fahmi karaa jawaabaha ay dadku ka bixin karaan qoraalkaaga.
Haddaan u soo laabto qoraalka, waa xaqiiq waqtigaan magaalo kasta oo soomaaliyeed qabiil ayaa sheegta. Taasi layaab malahan oo waxaa keenay dowlad la’aanta. Sida caadiga ah qof kasta wuxuu dhulka ku leeyahay meeshii uu asagu iibsado oo uu ruqsad u haysto. Sidoo kale qof kasta oo soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay in uu soomaaliya ka dego meeshii uu rabo, iyo in uu iska soo sharraxo meeshii uu doono.
Dadka ku doodaya dhulka waa la kal leeyahay warkoodu waa iska dhamaanayaa sababtoo ah qofka maamulaya kismaayo ama xamar ama boosaaso, ama hargeysa, dadka magaalada deggan ayaa dooranaya oo waa “nin iyo cod”. Maamulka gobollada sidoo kale. Marka deegaanka qabiilkaagu majority yahay haddaad hal nin codka ugu riddaan ninkaas ayaa soo baxaya oo saas ayaad ku maamulaysaan, haddii kalena waa hadba ninkii ugu cod bata qabiilkuu rabo ha noqdee. Laakiin waxaa mamnuuc ah in lala soo istaago nin aan reer hebel ahayn halkaan maamuli mayo, ama nin reer hebel ah halkaan ma maamuli karo.
suleiman bahwal says:	October 9, 2012 at 10:40 pm	dhulka marka hore Alle ayaa iska leh sida ay diinta noo sheegetey . bini aadamkana Alle meel kasta qolo ayuu ku abuurey oo dejiyey sidaa darteed waxaa iiga muuqda qoraaga ama daka la fikirka ah in aan la qeexin oo carabka lagu dhufan cida kismaayo leh ama degta!!. maxaa keeney in magaalooyin qaarkod qabaail ay sheegtaan oo ay dhahaan anaga muqdisho,boosaaso,caabudwaaq,hargeysa baydhabo ama boorame leh marka ay kismaayo arinteeda timaadana loo dhihi la’ yahay reer hebel ,iyo reer hebel ayaa dega amaba leh magaalada?? waa suaal aan jawaab ooga fahdino in ay noo cadeeyaan . hadii aan idiin duul marana dadka dega gobolkaas jubada hoose waa absame,shiikhaal.harti,gaaljjecel ,biimaal ,mushunguli ,baajuun cowramale ,magaalooyinka ama degmooyinkana waa lagu kala badnaan karaa . hadaba yaan laga dhigin magaalada ceel laheley oo qolo waliba iska sheegan karto taariikhdana waa ay u ku qoran tahay iayadoo xitaa ay qoreen dad aan somali aheen si aan loo dhihin qabiilkas ayaa qortey!!.
Fubi says:	October 9, 2012 at 10:43 pm	Walaalayaal waxba yaan hadal laysu daalinin, Kismaayo waa magaalo ka dhaxeysa qabiilo badan oo Soomaaliyeed inkastoo qabaailka qaarkiis ay uga badan yihiin kuwa kale. Taas micnaheedu ma ahan in qolada badani ay xaq uga keedahay kuwa yar. Ilaahay dadna wuu badiyay dadna wuu yareeyay. Magaalona horumar magaarto hadii qabiil sheegto. Ninka Afmadow AMA Baladxaawo kayimid ma ahan inuu kabadsado ninka ama ee magaalada ab ka ab udaganaa. Qolodii hada leh anaga magaalada hanalooga dambeeyo oo anaga ayaa maamulkeeda haynayna, taas micnaheedu ma ahan anagaa ayaa iska magaalada.
Mida kale ee meesha taala waxaa weeye, magaalada ka sokow, yaa dagan baadiyaha magaalada kusmaayo? Taas waxaan ula jeedii, foofafka Xamar waxaa dega iyo oo magaalada cowska iyo caanaha keena. Yaa Kismaayo cowska iyo caanaha keena?
maaneed says:	October 9, 2012 at 10:56 pm	KISMAAYO WAXAA LEH SOOMAALI, WAXAYNA U TALAA QABAAILKA DAGA SAY WAX U QAYBSAN LAHAYEEN.
CIID BOYZ says:	October 9, 2012 at 11:03 pm	anigu waxaan qabaa in ay tahay magaalo soomaaliyeed lkn wxaan ogahay gobolada jubooyinka iyo gedo inay degaanka ugu badan daganyihiin duriyadii , marka waxaan qabaa hadii maamul loo sameynayo in ay wada qaybsan doonaan beelaha iyo dadka walaalahood ah ee soomaliyeed….
dhiblaawey says:	October 10, 2012 at 1:30 am	waxaa n jeclaaan lahaaa in cadaalada la fiiriyo dhulka waxaaa leh siiba beesha oo aan walaalaha nahay hadaan nahay waan la dagnaa waxayna noo arkaan dad walaala ah lakiin maya iyo bishaaro says:	October 10, 2012 at 1:50 am	asc wr wb Kismaayo cida leh waa laguu yaqaanaa waxaa leh Daarood ismaaciil dagaan ahaan lkn waa magoolo soomaaliyeed dhibmaleh cidii u badan waase magaalo reer kaasi dago anyway yaanla soo cel celin yaa leh xoolo baadi ah maaha asc wr wb
loobogay says:	October 10, 2012 at 3:36 am	Kismaayo waxaa leh dadka deegaanka, kuwa labaxay Raskanbooni kenya ka ku daba dhuuman.
Ninkii xoogleh ayaa kismaayo leh, adkeysu in aad ku waartid. adiga iyo kenyaatiga aad wadato its only matter of time in ta ay dadka deegaanka is ka abaabulayaan in badaanka maalin cad lagaaga saaro oo waliba afmadow oo aad timid adigoo qaxooti dib laguugu celiyo.
wadaad yare says:	October 10, 2012 at 10:49 am	Aqristayaasha sharafta leh
Kuwa i naqdiyey iyo kuwa fahmey ujeedkeygaba
Somalida Bartamaha iyo Koofurta soomaaliya deggan badankoodu dowladnimo ayey u bislaadeen, baahideedna qabaan. Dowladnimadana haddaan la is indho tireyn waxaa lagama maarmaan u ah oo aysan dowladi jiri karin la,aanteed wax la yiraahdo “sovereignty” ama aayo ka talinta dowladdu ay ka taliso dhulkeeda. Dowlad aan laheyn aayo ka talinta dhulkeeda dowlad ma ahan.
Dowladdu way tabar yartahey awood badanna ma lahan waa sax. Laakiin awood macnawiya oo sharciya oo aad u weyn iyo xaq lama taabtaan ah ayey leedahey.
Xaqaas waxaa ku heysta iyadoo tabar darrideeda looga faa,iideysanayo qabaa,il kaashanaya shisheeye leh dano gooni ah.
Hadallo aad u nacasnimaa ayaan maqleynaa oo arrintaas ku aaddan. Mid reer NFD ah oo leh Kismaayo ayaan hoos geyneynaa Kenya oo NFD ayey la mid noqoneysaa. Mid leh Cabdi Ileybaa ciidan soo diraya.
NFD iyo Kililka Shanaad waa labo gobol oo hoos taga dowlado kale siyaadadood. Qabiilooyinka deggan oo soomaaliyeedna siyaado ka gooniya Kenya ama Itoobiya ma heystaane dowladahaas ayey ka tirsanyihiin.
Sidee dadka qaar ku keeneen iney u hanqal taagaan ama ku hadaaqaan hadalladaas maalaa yacnigaa? Kismaayo siyaadada qaranka soomaaliyeed ayey ku jirtaa. Dhoobleyna waa sidoo kale. Gobolkii intuu duruufta jira ka faa,iideystey isagu sameystey siyaado ka madax bannaan dowladda soomaaliyeed arrintiisu waa caqabad sugeysa dowladda xallinteedu.
Laakiin dowladdu ma aqbali karto in la sameeyo gobollo kale oo ceynkaas oo kalaa ama in la hoos geeyo qeyb dalka ka tirsan dal kale siyaadadiis.
Qabiil hebel haddaad tahey ood leedahey xuquuq waddani ah xuquuqdaada waxaad raadsaneysaa adigoo ku hoos jira siyaadada qaranka soomaaliyeed.
Laakiin Faarax Macallin iyo Yuusuf Xaaji oo ku hoos jira siyaadada qaranka Itoobiya hal kalimadna kuma yeelan karaan gobolka Jubbooyinka.
Dadka waa in runta kharaar loo sheego haba dudeene.
Mabda,iyan ayaan ka hadlayaa, laakiin intaas aan sheegeyba faro gelintu way ka imaaneysaa. Mabda,aasna waa mid aan ku qanacsanahey anigu iyo sidaan filayo dowladdu iyo aqlabiyadda shacabka soomaaliyeed oo taageersan dowladdu.
Dowladdu iyadaa leh siyaadada dhulkeeda ee qabiil ma leh siyaadada iyo aayo ka talinta dhulka.
Marka boorku kala dego oo caadifaddu xasishana wixii sax ah unbaa soo haraya, wixii aan sax aheyn ee riyo maalmeed ahna way baaba,ayaan.
mohamuud says:	October 10, 2012 at 1:42 pm	sanado badan ayaa deganaa kismaayo xiligii soomaaliya ay caadiga ahayd , kismaayo cid kastaa way deganayd dhibaatana iskumaanan qabin , xataa gobolka dadka u badnaa waa absame laakiin majirin cid cid kasheeganaysa ama leh anaa leh , waxay ahayd keliya reer waamo miyaad tahay reer joore miyaad tahay reer gosha miyaad tahay, sidaasay ahayd ilaahay markaan kabaqo ,muqdisho iyadun sidaas oo kale ayay ahayd oo cid gaar u sheegan jirtey majirin soomaali maxamed oo dhan ayaa deganayd runtiina dhib laiskuma qabin ,waxaanse qabaa marka muqdisho laxaliyo oo hadana caasimadii soomaaliya ah oo qabiil hadhana sheeganayo ,kismaayana kama duwanaan karto dariqaas khaldan ..dhulka ilaahay baa leh halagu wada noolaado. cid deegaanka xaq ku leh yaan la dulmin .jubooyinka iyo gedo dadka degan way is yaqaanaan yaan loo kala turjumin.meel isugu taga si wanaagsan maamul u samaysta oo aan dulmi ku jirin ,sidaasaa horumar lagu gaadhi karaa … soomaaliya weli mahaysato hogaamiye wanaagsan sidaan anigu u arko ..qabiil ayaa ka wada muuqda iyo lacag raadis
run kunoole says:	October 10, 2012 at 3:16 pm	kasoo qaad xamar yaa iska leh ,xamar waxaa leh ajuuraan ,iyo reer banaadiri soow maaha hadana xoog baa lagu maquuniyey oo waa loo awood sheegtay caasimadna uma qalanto.
jawhar yaa leh soow jareer weyne malaha oo 6 da shiidle malaha hadana waa laqariyaa xoog baana lagu maquuniyey…marka yaa leh shiikhaal baa leh gendershe waana la maquuninayaa oo habar gidir baaba ku haysata iyo biyo maal
kaxfadhiye says:	October 10, 2012 at 5:56 pm	walaal ra`yigaagu wuu fiicnaa intaadan su`aalaha billaabin oo waa sax arrinta aad sheegtay markay xaaladdu caadi tahay, hase yeeshee somalia xaaladdeedu ma caadibaa wakhtigan maanta la joogo?
Maya, oo waan wada ognahay. magaalooyin badan baad sheegtay in Kismaayo ay la mid tahay, waxaadse ka booday in aad xusto kuwa badan oo kale iyaguna la mid ah, sida boosaaso, hargaysa, dhuusamareeb oo aan intaba dawlad somaliyeed maamul ka samaynin. Arrinta aad muhimka u ah ee kale waxaa weeye Kismaayo gobol bay caasimad u tahay ee ma aha magaalo cidla` ku taalla, haddaba aan ku wayddiiyee maxaa kismmayo kaliya looga hadlahayaa?
sidaad ogtahay muddo dheer baa shabaab dagaal lagula soo jiray welina colaaddii way socotaa, haddaba dawladda aan la soconno inta taagteedu la egtahay maxaa la gudboon?
Aniga waxay ila tahay in ay tusto ciidanka shabaab la hardamahaya tixgelin iyo taageero intii awooddeeda ah, dadwaynaha somaliyeedna kalsooni laga dhex abuuro.
Safiya says:	October 10, 2012 at 6:26 pm	Wadaad yare aad iyo aad baan ula dhacay runtii makhaalkaaga mashaa allaah hadaad qortid 10 page xataa aqristuhu kama caajisaayo aqrinteeda illaa adigoo sii xiiseynayo aqriskii uu kaa soo gaba gaboobo mooyaane aqristaha aan ka hadlaayo waa midka jecel inuu mar uun arko Somali oo mid ah. Allaah ayaan kaaga baryaa in uu maskaxdaada nadiifkaa kuu dhowro. Mida kale Wadaadyarow waxaa fiicnaan laheyd inaad figradahaan quruxda badan oona qotada dheer eed xanbaarsan tahay in hadeey suuragal kuu tahay u gudbisid intii jecel midnimada Somaliweyn insha allaah.
Mowliid says:	October 10, 2012 at 8:05 pm	Xasan Shiikh Maxamuud waa in la horkeena baarlamaanka oo la casilaa, sababtoo ah wuxuu ka soo horjeedaa Dastuurka Dalka ee Federalismka ah, Caasimada Soomaaliya waxay gacanta ugu jirtaa qabiil yar oo Soomaalida ka mid ah, Inta laga helayo Caasimad ay Soomaali u simantahay oo waraabaha iyo masaska Xamar jooga laga sifaynayo waa in lakala joogaa. waa in aan ka tashanaa aayahayaga oo la sameeyo dowlad goboleedyo si baahida Xamar iyo Madaxweynahooda looga Kaaftoomo.
waa in Kismayo Afmadow Garbahaarey iyo Garowe Galkacyo Caabudwaaq laga sameeyo laba dowlad goboleed oo xoog badan.waa in la tusiyo waxa ay yihiin oo lala xisaabtamo. Xisaabta lala Xisaabtamayo Hawiye waxaa jira rag aad u yaqaan oo uu ka mid yahay Axmed Cali Madoobe iyo Dr Faroole, Marka waa in lala xisaabtamo Goonigoosatada degan Hargeysa. waa dadka keliya ee soo celinkara qaranimada Soomaaliya iyaga ayaana markii horena dhisay.
wadaad yare says:	October 10, 2012 at 10:49 pm	Safiya
Waad mahadsantey walaal. Dadka lama wada qurxoona fikraddeydu oo dadka wax ii soo qorey badankoodu weyba i weerarayeen. Laakiin markii miisaanka caadigaa oo dowladnimada wax lagu miisaamo ayey ila noqotey sidaas.
Dadka haddaad u fiirsato dowladnimada danba kama lahane qabyaaladda ayaa uga muhimsan.
Laakiin in doodaha lagu darsado waa lagu qasbanyahey haba la isku dhibsadee.
ali says:	October 11, 2012 at 6:06 am	waxaan hubaa hadii somalidu hesho maamul ku dhisan cadaalad oo aan eex ku salaysnayn in aan dadku ku mushquuleen gobal hebel anagaa leh, ee arintan in dadku sheegtaan gobal ama magaalo waxay ku salaysan tahay cabsi jirta oo qabiilo badan ay ka cabasanayaa in la dulmiyo, somaliyeey wax isu ogolaada, waxaadna ogaataan in inta sad-bursi uu jiro ayna nabad iyo dawlad toona inoo hirgalayn, waa in aynaan ka tagain qabiil laga tiro badan yahay mid tiro badan, waa in maamul kasta loo wada dhan yahay, hadaan wax la isku ogolaan khayr m ayaalo meesha
Muwaadin says:	October 12, 2012 at 4:39 am	To Wadaad yare
Waxaad mooddaa in aad weli iska indho tireyso waxa dadku kuu sheegayaan. Macquulna ma aha in dadka intaa le’eg ee aad hadalkan qabyaaladda ka buuxdo ku maagtay aad weli sii daba socoto. waxay u badan tahay in aad ogtahay sida gobolkaa loo kala dago, laakiin caadifadda qabiil ee kaa buuxda ayaa dhinac kuu leexineysa mar walba.
Sideedana marka dad badani wax kaa yiraahdaan hadal qalafsan ee aad ula soo bareertay waa la garwaaqsadaa, calal aqal laguma celceliyo oo waa la xishoodaa. Waad ogtahay in aad hadal gef ah halkan ku qortay laakiin dhaqanka soomalida qaar ayaa sidaa u dhaqma weliba kuwooda aan xishoon.
MARKII AAN MUQDISHO WAX KU YEESHO, AYAAD ADIGUNA KISMAAYO WAX KU YEELANEYSAA!! waa hadal kooban oo macno weyn ku siinaya ee kaa ku qanac.
muna says:	October 13, 2012 at 6:38 am	Adeer hadii lagu yiri Kismaanyo anaa leh asxaan weyn baa laguu sameyey waayo Xamar barqa cad ayaa dadkii la xasuuqay hantidoodiina laga qaatay kadibna la yiri xamar anaa leh ee hadii dagaalkii sokeeye lagugu soo dhaweeyey oo lagu marti galiyey waa kugu ceeb inaad abaal gud uga dhigtid yaa leh kismaanyo….Kismaanyo dadkii lahaa ayaa gacanta ku dhigay hadaad rabto la nooloow oo raaciye ka noqo
Axmed says:	October 13, 2012 at 8:03 pm	Kismayo ilahay baa leh kasokow somali baa leh qabil gara maleh waa caasimad casimadna qabil gara mayelan kro
A. Abdi says:	October 14, 2012 at 5:08 am	Saaxiib Warsame, haddii aad reer Jubbland tahay, waxaa lagaaga baahan yahay fikraddaada suuban ee ku aadan dhismaha, maamulka, nabadgelyada iyo danaha bulshada soomaaliyeed ee reer Jubbaland; hadiise aadan ka soo jeedin deegaanadaas, waxba aad ha isu daalinin. Waayo deegaanadaas waxaa u tashanaaya dadka Soomaaliyeed ee ku nool.
Saaxiib Kismaanyo waxay la mid tahay magaalooyinka kale ee Jubbaland, sida Afmadoow, Xagar, Badhaahde, Jamaame, Bu’ale, Jilib, Salagle, Saakoow, Garba-haarey, Luuq, Baardheere, B/xaawo, Buur-dhuubo, Ceelwaaq iyo kuwo kale oo badan. Waa dal iyo dad Soomaaliyeed oo dawladda iyo qaranimadaba taabacsan; isla markaaska xaq buuxa u leh in ay danahooda hoose maamushaa sida magaalooyinka iyo gobolada kale ee soomaaliyeed. Kama duwana kuwa ay ciidamada Shisheeye iyo kuwa deegaanadu wada xoreeyeen ee hadana ismaamula dawladoodana aqoonsan sida Dh/mareeb, B/weyne, Baydhabo, marka, Jowhar Muqdisho iyo qaar kale oo badan. kuwaas ma cid kalaa wax u dhisey mise iyagaa dhistey?. Sow ceeb kuguma aha in aad Magaalo Soomaaliyeed oo dadkuu ku dhaqnaa maamulanaayo, in aad qabiil ku sheegto oo dadkii kalena inkirto, Shame on you.
Xusuuso mudadii sanadka iyo dheeraadka aheyd ee dadka deegaanka Jubbland ay u halgamayeen sidii ay shabaabka uga xoreyn lahaayeen iyo kumanyaalkii wiil ee ku dhintey. Miyeyna la mid aheyn Dh/mareeb, Baladweyne, Bay iyo bakool iyo banaadir. Brother be fair, ra’yigaaguna ha abaaro halka uu leeyahay iyo gurigaaga. Soomaaliyi waa mid min Raas-kambooni ilaa Raas-caseyr, dawladdana waa wada aqoonsan yihiin, gurigoodana way kala maamushaan. Saaxiib maamul gurigaaga oo keliya, reer Jubbaland-na u daa arrimahooda iyo dawladdooda iyo danahooda, wey ku filan yihiine; sidaasna Soomaali halkaaga kaga ahow dawladdana ka taageer. Waad mahadsan tahay Bro.
hassan says:	October 15, 2012 at 12:58 pm	kismaayo hadii runta laga hadlo waxa ?ska leh hadii dhac iyo bur bur kale ?yo dagaal loo dan leeyahayna waaa kaasa wabilahi towfiiq
fowsiyo says:	October 17, 2012 at 12:56 am	Waxay rabaan in ay madaxdayada caayaan kuwoodana aan adeecno ka soo biloow Sayid Maxamed Cabdule,Maxamed Siyaad barre, Cabdulaahi Yuusuf , iyo Dr Faroole oo nool iyo Axmed madoobe, taasi waxa ay ku tusinaysaa anigu sax baan ahay adiguna waad qaldantahay waxaa ku jira nacayb qabiil oo fog. taasina waa mida aanan marna ugu kalsoonayn Hogaamiye Xamar ka yimi.
waan tashanaynaa Maamulka Puntland ee Dr Cabdiraxmaan Faroole uu ka yahy hogaamiyaha wuu jirayaa kan Juba land waa la dhisayaa, ma aamino karno dadka ay ku jirto nacaybka ay u qabaan dadkayaga Jubaland anagaa leh , intii ay talo ka sugi lahayd Xamar waxaan kaga kalsoonahay Yuhuuda iyo Kenyatiga sababtoo ah iyagu nama necba, war runta ha lay su sheego aaway guryahayagii Xamar aaway qarankii Soomaaliya waxaa cunay oo nool mooryaan diirato ah oo aan wax ba reebayn, mana aaminayno diiratadaas foosha xun ee nacaybku ka buuxo waxaa la gaaray xiligii aanu dhihi lahayn idin dooni mayno Xamar ma rabno qashin baa tihiin bal fiiriya Xamar siday tahay, ninkaad kabo ka tolanaysid kabihiisa ayaa la eegaa, nin qurmay oo dhintay oo jiran marna ku darsan mayno talo iyo fikir waa jiran yihiin ee ha laga fogaado.
mogadisho boy says:	October 18, 2012 at 6:40 pm	asc ww walaalyaal salaan kadib waxaan rabaa inaan idiin cadeeyo deegaan ahaan dadaka iska leh gololada jubooyinka taas oo ah arin macruuf ah oo somaali oo dhan way wada ogsoon tahay kismaayo degaan ahaan waxaa iska leh beelaha soo socda aniga oo aan ku hadlaynin qabyaald ama dad kale nacaykooda shaxda dadka degaankaas ka soo jedaa wa sidaa business ku sheeshay xiligii dowladii daakhiliga balse aan degaan ku lahayn oo ah marka maanta waxaa nasiib daro ah xili somali kabaxaday colaad iyo dagaalo sokeeyo ineey mesha soo galaan maleeshiyaad iyo mooryaan ka soo jeeda oo ay dhahaan waxaan leenahay kismaayo bal wayaabe ninka raaskanbooni la baxay muxuu u sheegan waay kismaayo 22 kii sano ee la soo dhaafay kismaayo hada miyaa la helay wayaabe
Wiil bari.mj says:	October 19, 2012 at 3:09 pm	Kismayo waxa iska leh jen.morgan wana usoda hada ama kanax ku farax wuw
Ahmed ganaane says:	October 20, 2012 at 8:09 pm	Aad ayuu umahadsanyahay qoraaga dhulka soomaaliya oo dhan soomaali baa leh. Lkn waxaa layaab leh in nin ween bulshada ladhax yimaada reer hebal baa iska leh meeshaas. Taas waxay kutusinaysaa inuu qofkaas yahay qof jaahil oo axmaq ah. Dadka fikirka nocaas ah qabana waa dadka kamasuulka ah soomaaliya inay sidaan noqoto
wIil hoog says:	February 17, 2013 at 2:34 pm	Asc dhamaan akhayaarta waad wada salaamantihiin. Qoraaga. Qoraalkaan qoray. Wuu mahadsanyahay somali eed kama dhamaato u dul qaado ku ku aflaadaynaya waa dadkaadii mida kale hadii layiaahdo kismaanyo yaaleh somalibaa leh. Ku qanac hadii kale caqlii daarood oo hada0 meesha ooga jeedo oo madaxda qaranka adinkoo qaxooti aad ku banaan baxayseen meelkastaa hala soo istaagina hadii kale ooy intaas idin qancinweydo kismaanyo hawiye ayaa leh waa xoog dagaal diyaar usoo noqda. Ninkii xoog leh ayaa cida u haraya
Somaliya says:	April 8, 2013 at 8:45 am	Nin dhagaxbuur(itoobiya) iyo nfd ka yimi asago qaxoonti ah ma xaq baa inu soomaalida dalka Somalia ka yimi dalkooda ku qabsado??? Soomaali shan baa loo qeybiyay marka nin garowe ka yiminoo jabuuti dega kama maqlaysid aniga leh. Nin hargeisa ka yimi oo muqdisho devan ma yiraahdo aniga eh maxa marka nfd iyo godey ay dalka somalia ufa sheeganayaan dalka ayago qxoontinimo ku soo galay somalia dagaaladi 1977-78???? sidan uu dhaqma soomaali kuma arkin bosasso baa ka buuxa kana ganacsada hadana ma maqlin dad ka dhashay magaalada aa martida ku nahay anaga iska leh. nfd iyo godey ka yimi degaan ay ku leeyihiin soomaaliya ma jirto mana sheegan karaan laakin waa ku noolan kraaraan si nabadgelyo leh.
Sh. Bashiir Axmed Salaad: Alshabaab Waxay isku hayaan Dhibaatadii ay Shacabka Soomaaliyeed ku hayeen
Qaar ka mid ah Masuuliyiinta G/Hiiraan oo ka Biyo diiday Xil ka qaadista lagu sameeyey Maamulkii Gobolkaas
Shirkii IGAD ee looga arinsan lahaa Amniga Soomaaliya oo Baaqday
Maryam Qaasim: Mawaadin walba oo Soomaali ah wuxuu heli doonaa Adeeg Caafimaad oo Dhamaystiran
Danjiraha Soomaaliya: Ciidamada Ethiopia Waxay Baxayaan Markay Ciidamada Soomaaliya Ku Wareejiyaan Goobaha Ay Joogaan
R/wasaarihii Hore ee Dalka Norway oo Casho Sharaf u Sameeyey waftiga Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya
Ciidan Boolis ah oo ka howlbilaabaya guddaha magaaladda Kismaayo
Tacsi ay dirayaan Maamulka iyo Shaqaalaha Shirkadda Dahabshiil Group
Marxuum Shaati-gaduud oo Baydhabo Aas-qaran loogu Sameeyey
SOMALIA: Shabelle river floods into Somalia’s Middle Shabelle region
SOMALIA: Somaliland president nominates a committee for the deceased official’s burial
SOMALIA: Senior Somali Politician Buried in Baidoa with high prestigious manner
SOMALIA: An Open Letter to Mr Abdulkadir Osman ‘Aroma’
SOMALIA: New Hiiraan governor reaches Beledweyn
SOMALIA: The motive behind Somalia-Somaliland talks in Turkey
Somalia: Health Problems face in Galgadud’s Balamballe town
SOMALIA: Government threatens to immediately seize Many Alshabaab Bases in Bay region
SOMALIA: AMISOM Head of Mission Visits AU Forces in Kismayo
SOMALIA: Somali MP “we have seen in Kismayo what to be role modeled.